Aretin'i Horner amin'ny alika | Tontolo alika
Ny aretin'i Horner dia aretina izay mitranga miaraka amina vondron-kery tsy ara-dalàna izay misy fiantraikany amin'ny vondrona hozatra sasany amin'ny tarehy Ary raha vantany vao simba ireo hozatra ireo dia tsy manana fahafaha-manao fifanarahana amin'ny fomba fanaony mahazatra.
Ny iray amin'ireo famantarana izay hahatonga antsika hahatsapa fa ny alikantsika dia voan'io aretina io dia izany ny iray amin'ireo hodi-masonao roa dia misy indray mitete izay tsy voajanahary.
1 Ratra mahazo ny hozatra
2 Ny antony mahatonga ny aretin'ny Horner
3 Aretin-tsofina mafy
4 Ahoana ny fomba hisorohana ny aretin'i Horner
5 Diagnostika sy fitsaboana
Ratra mahazo ny hozatra
Misy karazana alika sasany izay azo inoana kokoa fa tsy ny sasany hafa mijaly amin'ity aretina ity, anisan'ireo azontsika lazaina ny Golden Retriever.
Matetika izy io dia manao ny fisehoany ho toy ny ratra na fiasa tsy ara-dalàna ao amin'ny rafi-pitabataban'ny alikanay ary misy fiantraikany amin'ny fibre tsirairay izay tompon'andraikitra amin'ny mamindra ny tsiranoka hozatra amin'ny hozatry ny tarehy tsirairay. Izany dia zavatra iray mahatonga ny mpianatra hanao fifanekena be loatra ary tsy manana fahaizana mamaly ny tsiranoka tsirairay izay alefa amin'ny sisa amin'ny vatana.
Raha ny sela mikendry ny mandefasa famantarana nerve ho an'ny endrik'ilay alikanay simba, araka ny efa noresahintsika, ny hozatry ny volon'ilay sakaizantsika volom-borona dia tsy mandeha amin'ny fomba voalaza ary izany no mahatonga ny mpianatra hifanintona be loatra, satria tsy mahay mamaly ireo fientanentanana nalefa tany amin'ny vatana.
El Aretin'i Horner Izy io dia manana fahaizana manimba ny hozatry ny alikantsika tsirairay, na izany aza dia fahavoazana mety hitranga amin'ny faritra lavitra azy io. Amin'ny tranga sasany, io dia lesiona iray izay misy ny fivoarany ao amin'ny ati-doha, na izany aza amin'ny tranga hafa, ny faritra izay voa dia ny tapany ambony amin'ny tadin'ny hazon-damosina.
Ny antony mahatonga ny aretin'ny Horner
Betsaka ny antony mety mahatonga ny fisehoan'io aretina io, anisan'izany azontsika lazaina aretin-tsofina somary matotra, satria mety hisy fiantraikany amin'ny tsirairay amin'ireo kofehy izay tompon'andraikitra amin'ny fampitana ny tsiranoka amin'ny hozatra amin'ny hozatry ny tarehy. Toy izany koa, io aretina io dia mety hiseho amin'ny alikantsika raha toa ka sendra lozam-pifamoivoizana izy izay nisy fiantraikany tamin'ny faritry ny tendany na koa ny an'ny lohany ary na dia misy ratra eo amin'ny tratrany aza.
Tokony hitandrina tsara isika raha mipaka amin'ny alika hafa satria ny manaikitra dia mety hiteraka fahasimban'ny nerve.
Ny fandalovana toe-javatra iray izay nampijaly mafy ny alikanay, toy ny nandao ny fandaozana izay nanaintaina, no mety nahatonga an'io aretina io hiseho. Amin'ny tranga hafa, io aretina io dia mety vokatry ny aretina izay lehibe kokoa, toy ny homamiadana angamba.
Ireo toe-javatra mety hiteraka ny Aretina Syndrome Horner ao amin'ny alikanay.
Araka ny efa noresahintsika, amin'ny tranga sasany a marary sofina mafy izy io dia mety ho iray amin'ireo antony ampy hahafahana mamely ny tsirairay amin'ireo kofehy izay miandraikitra ny fampitana ny tsiranoka ho an'ny tsirairay amin'ireo hozatry ny tarehy. Ity dia zavatra iray izay tsy afaka manazava fa ny fikarakarana sy ny fanajana ny fomba fidiovana henjana eo amin'ny faritry ny sofin'ny alika dia mety ho zava-dehibe tokoa.
Rehefa manadio ny sofin'ny alika isika dia mety ny mamaritra raha misy aretina na areti-mifindra amin'ity faritra ity. Ny fidirana amin'ny lakandranon'ny sofina dia tsy maintsy mavokely mavokely, izay midika fa salama tsara ny alikanay ary tsy misy fofona ratsy ny sofina salama tanteraka.
Ny fisian'ny misy tsy fanarahan-dalàna amin'ny savoka amin'ity faritra pinna ity izy io dia afaka maneho ny fampitandremana aretina sasany.
Ny fofona tsy mahafinaritra ary koa mahery vaika izay avy amin'ny faritra misy ny sofin'ny alikanay dia mety hampitandrina izany misy ny aretina, fantatra koa amin'ny hoe otitis. Matetika ny fivontosana amin'ny lakandran-tsofina dia miteraka mangidihidy ary koa mahazo aina, tsikaritray fa manenjika mafy ny alika ary manetsiketsika ny sofiny amin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka.
Una aretin-tsofinaNa izany na tsy izany toe-javatra izany dia tsy maintsy misy antony ampy ahafahana mitsidika ny mpitsabo vetivety araka izay haingana indrindra.
Ny alika sasany dia mety hijaly noho ny ratra amin'ny nerve izay mampiavaka ny aretin'ny Horner syndrome. Alika an'ny karazana Golden Retriever, ambonin'izany rehetra izany dia manana tombam-bidy lehibe kokoa izy ireo amin'ny fananana fiasan'ny hozatry ny tarehy amin'ny endriny tsy ara-dalàna, noho izany dia afaka milaza isika fa mijaly amin'ity aretina ity amin'ny taha ambony kokoa noho ny karazany hafa alika.
Tsy ny karazana sindromina Horner rehetra akory mety mila fitsaboana, satria io aretina io amin'ny tranga sasany dia tsy miteraka fanaintainana amin'ny alikanay. Na izany aza, ary manoloana ireo soritr'aretina efa noresahinay, ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mitsidika mpitsabo biby ka amin'izany fomba izany dia azonao atao ny manolotra ny fitsaboana voalaza ho an'ny tranga tsirairay.
Ahoana ny fomba hisorohana ny aretin'i Horner
Na eo aza ny zava-misy fa amin'ny tranga sasany dia tsy misy ny fisehoan'io aretina io, afaka milaza isika fa azo atao ny misoroka an'io aretina io amin'ny fomba mahazatra sasany. Araka ny efa nolazainay, ny fahadiovana ao amin'ny faritry ny sofina dia tokony ho hentitra.
Toy izany koa, tena zava-dehibe ny fahafahantsika manao aza mifandona amin'ny alika hafa, na rehefa manova ny valan-javaboary na ny toerana an-tongotra raha toa ka ilaina izany. Raha sendra misy ny soritr'aretina dia mahatonga antsika hieritreritra fa ny alikantsika dia mety hijaly amin'ny aretin'i Horner, dia tsy tokony hisalasala isika manatona ilay mpitsabo biby.
Ny mpitsabo biby dia tsy maintsy mamantatra ny soritr'aretin'ny Horner raha te esory ny aretin-tarehy ary koa mba hahafahana mamaritra ny toerana nahatonga ny fahasimban'ny hozatra.
Izany dia fahasimbana izay dia mety hitranga amin'ny faritra roa samy hafa tanteraka, preganglionic ary koa postganglionic afovoany, ny tsirairay amin'izy ireo dia mety ho mariky ny antony mety. Fantatray ny aretim-pandrenesana voalohany nataon'i Horner vokatry ny fahasimbana eo amin'ny ati-doha sy ny tadin'ny hazon-damosina; ny filaharana faharoa dia mitranga rehefa inona ny faritra misy ny marary mialoha ny eo am-pototry ny karandohany ary koa ny loaka am-bava sy ny Syndrome Horner an'ny laharana fahatelo dia manondro fahasimbana aorian'ny ganglionika eo anelanelan'ny fototry ny karan-doha sy ny maso mihitsy.
Ny mpitsabo biby dia afaka mamaritra hoe aiza ny fahasimbana amin'ny alàlan'ny fampiasana fantsika mitete ny maso mba handrisika ny ampahany amin'ny nerve ary jereo ny fihetsik'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Aretin'i Horner amin'ny alika
Fa maninona ny alika no mampidina ny rambony?